Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် – သုတရသ
Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန်
စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် ၏စာစောင်ကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးပါရစေ
(စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)
Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….သမီးလှလာဟင့်…
ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီရလို့ တဏှာရူးတွေရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ်… ညစ်ညမ်း မှုတွေအောက်မယ် သား မယား အဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ့မတို့အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူ
ကြီး အဖြစ်ဖော်ပြလို့ မိမိရဲ့အမှားတွေကိုပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲမို့စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့် ခံနေရှာတယ်…. အကိတ် အကိတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်စကားကြောင့်မိန်းမသားတချို onlineကို ဘဝထင် ဆယ်လီဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရဖို့
အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ချွတ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေအတွက် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆယ်လီရူးတွေ များလာခဲ့တယ်… မင်းသမီးတွေက ဖော်ချွတ် ဆယ်လီရူး ငပိန်းမတွေက အကုန်ဖော်ထုတ်လို့ဖာဆန်ဆန်စရိုက်ပျက်တွေနဲ့ onlineဆိုတာ
သားကောင်ရှာတဲ့ ပုရိသကျားတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖာချစရာမလို Free မုဒိမ်းကျင့်လို့ရနေခဲ့ပြန်တယ်… သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုရိသတွေကိုချုပ်…ရင်လေးကိုဖော် တင်လေးကော့လို့ ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေ နည်းတွေနဲ့ ပြုစားအမြီးလေးနန့်အညှီအဟောက်ကြိုက်တဲ့
တဏှာရူး ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ အားပေးမှုအောက်မယ်တော်တော်ခရီးပေါက်လို့ အော်…ငါ့ညီမလေးများကငွေပေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားပဲ ငါကတော့ Facebook ဆယ်လီကွ ဆိုတဲ့ မာန် နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် အလှဘုရင်မ တစ်ပါး လိုထင်ပြီးLike တွေ ပေါ်မှာ
ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပန်းလေးတို့ရေ…စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တွေ လေ့လာရမယ့်ချိန်like ပေးသူများ အတွက် cbမှာအချိန် ဖြုန်းလို့တစ်နေ့တာ online တက်ချိန် ညီမလေးတို့ ဘာပညာတွေ တိုးပွားခဲ့လဲ? တကယ်ခေတ်မှီပြီး ဆိုရှယ် ကျတဲ့
အမျိုးသမီးတွေကမိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာဆေးခြယ်ပြီး သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ့ က online ကိုဘဝအောင်မြင်မှု့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ် ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာပဲ
အဓိက ထားပြီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နည်းပညာတွေ အာရုံထားတက်ကြတယ် မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေ က Online ပေါ်က လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂ သာယာမှု့ အတွက် အစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ချနင်းပြီ ကျော်ကြားမှု့ ကို
မမက်မောဘူး… မိန်းမသား သဘာဝ လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့စကား မိန်းမသားတိုင်း သဘောတွေ့ ပေမဲ့ အလှတရားဆိုတာ ဘဝတစ်ခုလိုသတ်မှတ်မထားဘူး မိန်းမသား တိုင်းရဲ့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့..လိုအပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အလှချယ်သလို့ထေိုင်ကြတယ် မိမိ
အလှကရမ္မက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်း မယူဘူးပုရိသ တွေ အတွက် စိတ်ကူးနဲ့တစ်ညအပန်းဖြေဖို့ အတွက် အလှပြင်တာမဟုက်ဘူး… နှာဘူးအကြိုက် လိုက်ပြီး မိမိ ရှိတာတွေ ဖော်ပြရင်တော့ယောင်္ကျား သဘာဝ ပါးစပ်ကလေးစိုက် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီးရရင်အမြတ်
မရရင်အရင်းဆိုပြီး ရိတဲ့တဲ့ အပြောခံအကြည့်ခံမစစ်မှန်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာနေပြီမို့ ပန်းလေး တို့ရေ …စိတ်ကူး နဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောက် စေနဲ့ကွယ်ဆယ်လီဆိုတာဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်တဲ့ နာမ်စားတစ်ခုပါလို့ပြောကြားရင်း
နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ စာရေးသူကို မကောင်းမြင့်လို့ တဏှာ ရူးလိုသတ်မှတ်ရင်ချက်ချင် block သွားနိုင်ပါတယ် စေတနာ မေတ္တာ အနစ်နာ များစွာဖြင့်ဤ စာအား ရေးသား လိုက်သည်… စာဖတ်သူအား အစဉ်လေးစားလျှက်ပါ… ထာဝရ#ကိုကြီး “သိန်းမောင်မောင် ”
စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး ခံနရေတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပျေါမှာ ပုံတငျကောငျးသော အဈမ ညီမလေးမြား မကြျောပဲဖတျပေးကွပါရနျ ၏စာစောငျကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတျရသေးတဲ့ သူတှအေတှကျ ပွနျတငျပေးပါရစေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုငျးကောငျး
ရိုငျးနိုငျပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ပှငျ့လငျးစှာပွောတတျတဲ့အမူအကငျြ့ကွောငျ့ စာဖတျသူမြား နားလညျပေးစလေိုပါတယျ…ဒီစာကိုဆုံးအောငျဖတျကွညျ့ပါ…ဖတျပွီး ရငျထဲမှာအမှနျတရားတဈခု သိရှိလကျခံလိုကျကွရမယျဆိုရငျ ရေးရကွိုးနပျပါပွီ)Facebook ပျေါမှာ မိနျးမသားတဈခြို့
မှားယှငျးမှုတှေ နဲ့ သာယာနကွေတာတှရေ့တယျ… ပုရိသ ကြားသဘာဝ ကို နားမလညျ… ထငျပျေါမှုအတှကျ မပျေါ ပျေါအောငျဖျောလို့… အဝတျဗလာလေးတှနေဲ့ဆယျလီရူး ရူးနကွေပွနျတယျ ….သမီးလှလာဟငျ့… ဆိုတဲ့နောကျမှာ သားကောငျရှာတဲ့ ကြားတခြို့ပေးတဲ့ likeသိနျးခြီရလို့
တဏှာရူးတှရေဲ့ အလှဘုရငျမ အဖွဈ မော့ကွှားနကွေပွနျတယျ… ညဈညမျး မှုတှအေောကျမယျ သား မယား အဖွဈဆဲဆိုခံနရေလညျး သူ့မတို့အတှကျ စိတျထားကောငျးသူ ကွီး အဖွဈဖျောပွလို့ မိမိရဲ့အမှားတှကေိုပွုပွငျဖို့ မကွိုးစားဘဲ ဖျောမွဲ ထုတျဖျောပွမွဲမို့စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ ခံနရှောတယျ….
အကိတျ အကိတျဆိုတဲ့ ခတျေစကားကွောငျ့မိနျးမသားတခြို onlineကို ဘဝထငျ ဆယျလီဆိုတဲ့ နာမျစားလေးရဖို့ အပွိုငျအဆိုငျ ဖျောခြှတျလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှအေတှကျ စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခံနရေတဲ့ ဆယျလီရူးတှေ မြားလာခဲ့တယျ… မငျးသမီးတှကေ ဖျောခြှတျ ဆယျလီရူး ငပိနျးမတှကေ
အကုနျဖျောထုတျလို့ဖာဆနျဆနျစရိုကျပကျြတှနေဲ့ onlineဆိုတာ သားကောငျရှာတဲ့ ပုရိသကြားတှအေတှကျ ပိုကျဆံပေးဖာခစြရာမလို Free မုဒိမျးကငျြ့လို့ရနခေဲ့ပွနျတယျ… သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုရိသတှကေိုခြုပျ…ရငျလေးကိုဖျော တငျလေးကော့လို့ ဆယျ့နှဈကွိုးကဝေ နညျးတှနေဲ့
ပွုစားအမွီးလေးနနျ့အညှီအဟောကျကွိုကျတဲ့ တဏှာရူး ခှေးတဈအုပျရဲ့ အားပေးမှုအောကျမယျတျောတျောခရီးပေါကျလို့ အျော…ငါ့ညီမလေးမြားကငှပေေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားပဲ ငါကတော့ Facebook ဆယျလီကှ ဆိုတဲ့ မာနျ နဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ့ အလှဘုရငျမ တဈပါး
လိုထငျပွီးLike တှေ ပျေါမှာ ဂုဏျယူနတေဲ့ ပနျးလေးတို့ရေ…စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တှေ လလေ့ာရမယျ့ခြိနျlike ပေးသူမြား အတှကျ cbမှာအခြိနျ ဖွုနျးလို့တဈနတေ့ာ online တကျခြိနျ ညီမလေးတို့ ဘာပညာတှေ တိုးပှားခဲ့လဲ? တကယျခတျေမှီပွီး ဆိုရှယျ ကတြဲ့
အမြိုးသမီးတှကေမိတျကပျနဲ့မကျြနှာဆေးခွယျပွီး သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး ထကျမွကျတဲ့အမြိုးသမီးတှေ့ က online ကိုဘဝအောငျမွငျမှု့ အတှကျ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ဘယျလို နထေိုငျသငျ့တယျ ဘယျလိုတိုးတကျပွောငျးလဲနတေယျဆိုတာပဲ
အဓိက ထားပွီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နညျးပညာတှေ အာရုံထားတကျကွတယျ မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျတှေ က Online ပျေါက လှတယျ ခြောတယျ ဆိုတဲ့ တဒင်ျဂ သာယာမှု့ အတှကျ အစဉျအမွဲထိနျးသိမျးထားတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ ကို ခနြငျးပွီ ကြျောကွားမှု့ ကို မမကျမောဘူး…
မိနျးမသား သဘာဝ လှတယျ ခြောတယျ ဆိုတဲ့စကား မိနျးမသားတိုငျး သဘောတှေ့ ပမေဲ့ အလှတရားဆိုတာ ဘဝတဈခုလိုသတျမှတျမထားဘူး မိနျးမသား တိုငျးရဲ့ မရှိလညျးဖွဈတဲ့..လိုအပျခကျြတဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ အလှခယျြသလို့ထေိုငျကွတယျ မိမိ အလှကရမ်မကျအနနေဲ့အသှငျပွောငျး
မယူဘူးပုရိသ တှေ အတှကျ စိတျကူးနဲ့တဈညအပနျးဖွဖေို့ အတှကျ အလှပွငျတာမဟုကျဘူး… နှာဘူးအကွိုကျ လိုကျပွီး မိမိ ရှိတာတှေ ဖျောပွရငျတော့ယောင်ျကြား သဘာဝ ပါးစပျကလေးစိုကျ ခဈြခှငျ့ပနျပွီးရရငျအမွတျ မရရငျအရငျးဆိုပွီး ရိတဲ့တဲ့
အပွောခံအကွညျ့ခံမစဈမှနျတဲ့ အခဈြတှနေဲ့ အရှေးခယျြခံရဖို့ သခြောနပွေီမို့ ပနျးလေး တို့ရေ …စိတျကူး နဲ့မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောကျ စနေဲ့ကှယျဆယျလီဆိုတာဂုဏျယူစရာမဟုတျတဲ့ နာမျစားတဈခုပါလို့ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျပါတယျ။
စာရေးသူကို မကောငျးမွငျ့လို့ တဏှာ ရူးလိုသတျမှတျရငျခကျြခငျြ block သှားနိုငျပါတယျ စတေနာ မတ်ေတာ အနဈနာ မြားစှာဖွငျ့ဤ စာအား ရေးသား လိုကျသညျ… စာဖတျသူအား အစဉျလေးစားလြှကျပါ… ထာဝရ#ကိုကွီး “သိနျးမောငျမောငျ ”
ဗိုက်ခေါက် ထူနေသူများအတွက် ဗိုက်ပိန်ဆေး ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး